विश्वास टुटेको त्यो रात |
प्रकाशित मिति :2020-02-28 12:37:21
भनिन्छ, यो संसार विश्वासमा अडेको छ । विश्वास एउटा यस्तो कडी हो, जसलाई प्राप्त गर्न जति कठिन छ, गुमाउन त्यति नै सजिलो । आहा कति आनन्द छ यो शब्दको उच्चारणमै । जिउने आधार पो हो त विश्वास । कसैलाई विश्वास गर्दा जति आनन्द आउँछ, गुमाउदा त्यो भन्दा धेरै पीडा हुन्छ । भनिन्छ, संसारका हरेक सम्बन्धहरू विश्वासमा अडिएका छन् । आज यदि विश्वास भन्ने शब्द नहुदो हो त हामी सभ्य र विकसित मानिने मानव पनि हुने नै थिएनौं । विश्वासमा यहाँ के–के मात्रै भएको छैन होला ? व्यापारमा होस्, पारिवारिक सम्बन्धमा होस्, लेनदेनमा होस्, यी यावत् विषयमा विश्वासलाई साँक्षी राखिएको हुन्छ । अब सोचौं जब यो साँक्षी नै विष्फोट भै दियो भने ! विश्वासमाथि घात भैदियो भने !
किरण र लिली बालसखा, जो सँगै हुर्के बढे । सँगै पढे । बाल्यकालसँगै बित्यो । किशोरास्थासँगै बिताए । युवा अवस्थामा पढाइको सन्दर्भमा टाढिए । जब एक अर्काबाट टाढिए, उनीहरूलाई महसुस भयो कि उनीहरूमा प्रेम बसिसकेको रहेछ । किरण बैंगलोरमा पढ्दाको त्यो ३ वर्ष बिताउन उनीहरूका लागि ३ दशक झैं गारो भो रे । उनीहरूकै मुखबाट सुनेको मैले । दुरीबाट टाढा भए पनि संचार माध्यमबाट उनीहरू नजिकै थिए । यहाँसम्म कि उनीहरू एक अर्को बिना बाँच्न नसक्ने अवस्थासम्म पुगे । प्रेमको अन्तिम रुप विवाहमा गएर टुंगिन्छ भन्छन् । उनीहरूले पनि विवाह गरेर आफ्नो प्रेमलाई जिवन्त राख्ने निधो गरि दुवै परिवारको सल्लाहमा विवाह गरे । समय बित्दै गयो । उनीहरूका मायाका चिनाहरू छोराछोरी पनि भए । घरबार राम्रै चल्दै थियो ।
समय बित्दै गयो । उनीहरू सुन्दर भविष्यको सपना देखेर गाउँबाट काठमाडौं छिर्छन् । अब उनीहरूको असली संघर्षको जीवन शुरु हुन्छ । किरणले एउटा नाम चलेको प्राईभेट बैंकमा काम गर्न शुरु गर्छन् भने लिलीको भागमा घर सम्हाल्ने काम पर्छ । काठमाडौंको रहनसहन, बैंकको टिपटपको जागिरी । किरण दिनप्रतिदिन परिपक्क हुँदै अगाडी बढ्दै जान्छ । यता गृहस्थीमा रमाईरहेकी लिली बाह्य संसारको दाँजोमा आफूमा परिवर्तन गर्न नसके पनि घरपरिवार, बालबच्चा सम्हालेर बसेकी थिईन् । किरण बिहान ९ बजे घरबाट निस्कने, बेलुका ढिलामा ७ बजेसम्म घर पुगिसक्थे ।
समय बित्दै जान्छ, किरणका व्यबहारहरू परिवर्तन हुँदै जान्छन् । अब उसले लिलीमा भएका कमजोरीहरू कोट्याउँदै जान्छ । कहिले उ लिलीलाई तिमी कस्तो मोटाको, तिमी त कस्तो समय अनुसार अपडेट हुन नसकेकोे, तिम्रो त ड्रेस अप नै राम्रो भएन । आदि इत्यादी गुनासाहरू गर्दै लिलीलाई मानसिक हिंसा गरिरहन्छ ।
बिचरा लिलीलाई बाहिरी संसारमा के भैरहेको छ के थाहा ? एउटा घरको, एउटा फ्लाटमा सिमित उसको दिनचर्या । घर, घरदेखि बच्चाहरूको स्कुल अनि घर । यही थियो उसको संसार । घरायसी कामले एकछिन फूर्सद छैन उसलाई । उता किरणको दिनचर्या बद्लिँदै छ । बिहान छिट्टै घरबाट निस्कने, बेलुकी ९ बज्दासम्म घर नआउने । फोन गर्दा नउठाउने । कि सँधै फोन व्यस्त हुने आदी इत्यादी । भनौं न, किरण एक प्रकारले बद्लिसकेको थियो । उसको लवाई खवाई, बोली, व्यबहार सबै परिवर्तन हुँदै जान्छ । किरण पहिलाको जस्तो किरण रहेन । उ मैले पढनुपर्छ, म अलग्गै कोठामा सुत्छु । तिमीहरू एउटा कोठामा सुत भन्न सक्ने अवस्थासम्म पुग्छ । लिली यी सबैकुरा बिना प्रतिबाद सहेर बसिरहन्छिन् । सहेर बस्नुको विकल्प पनि त के थियो र उनीसँग ।
किरणको बद्लिँदो व्यबहारले आजित लिलीले बिस्तारै बाहिर अरुसँग पीडा पोख्दै जान थालिन् । भन्छिन्, ‘मेरो त भाग्य यस्तै रहेछ । माया गर्ने श्रीमान् आजभोली बद्लिएको छ ।’ मन भारी भएर पनि उनी खुशी भएको भान गर्दै थिइन् ।
एक दिन बेलुकी ९ बजे लिलीको फेसबुकमा एउटा सन्देश आउँछ–नयाँँ फेसबुक आईडिबाट । जहाँ लेखिएको थियो, ‘प्रेम नै नभएको सम्बन्धमा के तिमी खुसी छौ ? तिमीलाई सायद अलिअलि थाहा छ होला किरणले तिमीलाई होईन, मलाई प्रेम गर्छ आजभोली । के तिमी उस्लाई साँच्चिकै प्रेम गछ्यौ ? के उसलेतिम्रो प्रेम पाएको भए मसँग आउथ्यो होला त ? के उसलाई मेरो आवश्यकता पर्दथ्यो ? म तिमीलाई दोष दिन्न । तर तिमी आफूले आफूलाई समय अनुसार परिवर्तन गर्न सकिनौं । तिमी किरणको लायक हुन सकिनौं । तिमीले उसलाई माया गर्न जानिनौ । तिमी देखाउनकै लागि एक प्रेमविहीन विवाहलाई किन निभाइरहेकी छौ ? तिमीहरूको विवाह नामको मात्र छ । किरणले मलाई प्रेम गर्छ, तिमीलाई होईन । त्यसैले किरण र मैले विवाह गरेर अब बाँकी जीवन सँगै बिताउने निधो गरेर यो ठाउँ छोडेर जाँदैछौ ।’
यसमा दोष ती महिला र किरण दुवैको बराबरी छ भन्न रुचाउछु म । यो भन्दा बढी अरु केही भन्दिन । विचरा निरीह लिली ।
यो ईलेक्ट्रोनिक सन्देश पढिसकेर भुइँमा थचक्क बसेकी लिली त्यहाँबाट उठ्नै सकिनन् । मानौ उनले टेकेको त्यो धर्ती फाटेर चिराचिरा भएको थियो । घरको छत खसेर उनलाई माथिबाट थिचिरहेको थियो । बच्चाहरूलाई खाना खान दिन सकिनन् । उनीहरू आमालाई खाना माग्दा माग्दै त्यही ठाउँमा निदाए । उनले पनि खानै नखाई त्यो रात बिताईन् । त्यो रात किरण न घरमा आए, न त्यो घरको बत्ति नै रातभरि निभ्यो । फोन गर्दा अफ थियो । सुनसान रात, कुकुरहरू भुकेको मात्रै सुनिन्थ्यो । तर किरण घर आएन । उनलाई लाग्यो अब साँच्चिकै किरण मसँग आउँदैन । उसले मसँग नबस्ने नै निधो गरेछ । उ हामीलाई छोडेर गयो । शहर बजारको बसाई, छोराछोरी, कोठाभाडा, स्कुलको फी यी सबै म कसरी सम्हालौं ? हे भगवान ! भन्दै निधार भित्तामा ठोक्दै भक्कानिएर रोईरहिन् लिली । तर त्यो चित्कार र पीडा सुनिदिने त्यहाँ को हुनु र ? सिवाय घरको भित्ता । त्यही रात थियो किरणप्रति विश्वास टुटेको ।
सोचिन्हा, मी सँगै हुर्के बढेका । सँगै पढेका । एक अर्कालाई चिनेका । घरपरिवार सबै बुझेको । तर आज ? किरण भन्दा म केमा कमी थिएँ र ? एसएलसी पछि किरण घर छोडेर बाहिर गएर राम्रोसँग पढ्ने मौका पायो, म घर नजिकैको सामान्य क्याम्पसमा पढेँ । विवाह पछि किरणले घर बाहिर गएर काम गर्ने मौका पायो, म घरभित्रै सिमित भएँ । किरणको जस्तै अवसर र मौका मैले पनि पाएको भए म पनि त उ भन्दा केही कमी हुने थिइन । मैले पनि त्यही मौका र अवसर पाएको भए आज म यसरी कमजोर त हुनु पर्ने थिएन ।
म छोरी भएकै कारण, म महिला भएकै कारण म अवसरहरूबाट बंचित भएँ । किरणले अवसर पायो । काम गर्यो । हामी एउटै तहका हौं । तर समयको परिवर्तनसँगै बिस्तारै म उसको लायक हुन सकिन । कारण, म अवसरबाट बंचित भए । विवाह पछि छोराछोरी हुर्काउने जिम्मा मेरो मात्र काँधका पर्यो । उसले बाहिर गएर आफ्नो क्षमता विकास गर्दै गयो, म यता आफूमा भएको क्षमता पनि दिन प्रतिदिन गुमाउँदै गएँ र शून्यमा झरें । आज उ बिना जीवन कसरी जिउने भनेर अलमलमा परें । जस्लाई विश्वास गरें, जोसँग जिन्दगी बिताउने निधो गरें, उसैले मलाई बीच बाटोमा धोका दिएर गयो । म मात्र होईन, यी कलिला मुनाहरूको बारेमा पनि नसोचेर स्वार्थी भएर गयो आज किरण ।
समय परिवर्तनशील छ । हिजो जे तिम्रो थियो, त्यो आज नहुन सक्छ । र भोली जे हुन्छ, त्यसको कल्पना आज गर्न सकिदैन । यो संसारमा विश्वास कसैको छैन । आजको यो पुँजीवादी विश्वमा कोही कसैको भरमा बाँच्ने, जीवन जिउने आशा नगरौं । छोराछोरी कसैमाथि विभेद नगरि समान अवसर र मौकाहरू दिलाउँ । आफ्नो खुट्टामा आफै उभिएर मात्र विवाह गरौं, ताकी लिलीको जस्तो अस्तव्यस्त जीवन भोलीका दिनमा कसैको पनि नहोस् । आफ्नो क्षमता अनुसारको आय आर्जन हुने काम गरौं, क्षमता विकास गरौं । सधै अरुकै भर पर्दा र आँखा चिम्लेर विश्वास गर्दा भोली लिली जस्ता सयौं लिलीहरूको संख्या नबढोस् ।
पितृसत्ताले जरो गाडेको नेपाली समाजमा महिलाहरूको विकास र उत्थान हुन निकै गाह्रो छ । लिंग भेद बिकराल छ । लंैगिक समानता भन्ने नारा नारामै सिमित छ । महिला विकास र उत्थानका लागि लिंग भेद नगरौं । विद्यमान कुरीति कुसस्कारको अन्त्य गरौं छोराछोरीमा भेदभाव नगरौं, छोरीको सानैमा विवाह नगरिदिउँ । यसका लागि महिला र पुरुष दुवैको समान दायित्व छ । महिला मात्रैको एकल प्रयासले यो अभियान कुनै हालतमा पूरा हुदैन । यो कुरा कहिल्यै नभुलौं कि, महिलाको उत्थान, विकास, समृद्धि र सशक्तिकरणमा पुरुषको साथ र सहयोग एकदमै आवश्यक छ ।